Ny vondrom-piarahamonina RO MAM misy vondrom-poko etnik 54 any Vietnam - Tany masina amin'ny fianana any Vietnam
Tizy RO MAM dia misy olona 418 monina ao Kaominina Le Village Mo Rai, Distrikan'i Sa Thay of Kon Tum1 Province. Ny fiteny RO-MAM dia an'ny Mon-Khmer2 vondrona.
Fraha ny tena izy, ny RO MAM dia mivelona amin'ny fambolena vary miraikitra indrindra ho sakafony amin'ny milpas. Ny lehilahy dia nihady lavaka tamin'ny hazo roa ary nisy vehivavy nandeha tany aoriany hamafy voa ho any an-davaka. Ny fihazana sy ny fanangonana dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainany ara-toekarena. Amin'izao fotoana izao dia tsy ny vary sy ny com ihany no novolen'izy ireo fa ny kafe sy dipoavatra ihany koa. Ampiakarina koa ny fiompiana. Anisan'ny fanenomana an-tsisin'izy ireo novolavolaina indrindra saingy nihena izy io tato ho ato, satria ny RO MAM dia mitafy lamba indostrialy efa vonona hitafy.
RO ny vehivavy MAM dia manao lobaka lava sy lava fohy lava. Ny lungis dia vita amin'ny lamba maditra tsy misy haingon-trano ary miankohoka eo ambanin'ny lohaliny. Ny lehilahy dia manao fehin-kibo izay manantona ny valahany eo ambonin'ny lohaliny ary ny valahany aoriana mankany amin'ny valahany. Araka ny fomba amam-panao taloha, dia nitafy nify ambony ny tanora. Androany, nofoanana io fomba fanao io. Ny vehivavy dia tia manao kavina kavina ary rojo vita amin'ny vakana.
Tizy tanànan'ny RO-MAM dia nateraky ny loholona iray izay nofidian'ny mponina. Taloha dia tanàna RO-MAM nisy trano lava folo. Amin'izao fotoana izao dia tsy namboarina intsony ny trano lava fa ny RO-MAM dia miaina anaty trano kely misy tafo vita amin'ny taila. Misy Rong (tranon’olona) amin'ny faran'ny tanàna.
Troa ny fombafombam-panambadiany RO MAM dia tanterahina amin'ny dingana roa: fifamofoana sy fampakaram-bady. Ny fahatokiana dia misongadina ao amin'ny fiainana miray amin'ny mpivady. Rehefa maty ny olona dia atao ao anaty iray na roa andro ny fandevenana azy. Any andrefan'ny tanàna no misy ny fasana ary voalamina milamina ny fasana. Ny maty tsy mba milevina manatrika ny tanàna ary ny fasana dia tsy hita atsinanana mihitsy noho ny tahotra sao hamakivaky ny tanàna toy ny masoandro ny fasana. Aorian'ny fandevenana dia atsangana ny tranom-pasana ary omena fananana ny maty.
Tizy RO MAM dia mino mifandraika amin'ny fambolena. Ny fombafomba sy ny lanonana dia tanterahina ao anatin'ny tsingerin'ny famokarana manomboka amin'ny fanesorana ireo vina-tany ka hatrany amin'ny fitondrana vary any am-bary no hetsika fanaovan-tsoa izay mbola notehirizina mandraka ankehitriny.
Ny hetsiky ny olona RO MAM any amin'ny faritanin'i Kon Tum (Loharano: Mpanonta VNA)
(Visited 2,618 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny vondrom-piarahamonina HRE misy vondrona foko 54 any Vietnam
Ny vondrom-piarahamonina NUNG misy vondrona foko 54 any Vietnam →
Ny Fanjakana VAN LANG (2879 talohan'i JK - 258 talohan'i JK, 2621 taona)
Comments Off ao amin'ny The VAN LANG Kingdom (2879 talohan'i JK - 258 talohan'i JK, 2621 taona)
INDRINDRA amin'ny tranokala NY FANDAHORANA HOLOTRA NY FIANAKAVIANA VIETNAM
Comments Off amin'ny INTENTION ny tranokala NY TANY MASINA FIANARANA VIETNAM
Ny fiahiahy ny OLONA MANEHOANA - Ny ahiahy ho an'ny KITCHEN sy ny CAKES
Comments Off momba ny olan'ny OLOMBELOMBELONDRANA - Ahiahy ho an'ny KITCHEN sy CAKES
Ny vondron'olona HA NHI an'ny antokon'olona 54 any Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondron-tarika HA NHI misy antokon'olona 54 any Vietnam
NY HAFA TRANO FIVORIANA MOA
Comments Off amin'ny TRAN'ny FIVORIANA FIVAVAHANA
Ny PA THEN Community an'ny vondrom-poko 54 ao Vietnam
Comments Off ao amin'ny Vondron'olona PA THEN misy vondrom-poko 54 ao Vietnam
Eto amin'ny SOUTHERN FIKOROANA: TOKONY HAFA KOKOA PARALLEL
Comments Off amin'ny SOUTHERN FIKOROANA momba ny firenena: FIVORIANA TANANA PARALLEL
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 ao Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondron'olona BRAU misy antokon'olona 54 any Vietnam
KARISORANA an'ny Lý Toét, Xã Xệ
Fitsidihana anio: 256
Andro farany 7 nitsidika: 2,231
Total visits: 420,482